Wepụ iTunes Library efu egwu
Akara ngosi nke TunesGo ugbu na PC gị na kwesịrị ịbụ abụọ clicked na ga-emeghe software. Dị ka software bụ na-emeghe, a n'ụlọ peeji dị ka onye dị ka n'okpuru nyere ihuenyo ogbugba ga-apụta.
Iji ịkpali na ndepụta nke tracks ugbu a na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ, i kwesịrị pịa na nhọrọ nke "Music" ugbu n'okpuru iTunes n'ọbá akwụkwọ na aka-ekpe-n'akụkụ menu nke TunesGo page. (Nseta ihuenyo egosi red akara igbe)
Nzọụkwụ 3. họrọ "ọcha" - "Clean efu egwu" ọrụ
Ugbu a ịkwaga n'elu ụlọ mmanya menu nke TunesGo na site ebe a pịa nhọrọ nke "dị ọcha Up". A dobe ala menu na ndepụta ga-emeghe si ebe mkpa ka ị họrọ "dị ọcha na-efu egwu" nhọrọ. (Nseta ihuenyo egosi red akara igbe)
Nzọụkwụ 4. click "dị ọcha" button
Ugbu a, a ndepụta nke na-efu iTunes tracks ga-apụta. (Nseta ihuenyo egosi 28 efu tracks). Iji wepụ ndị a songs pịa na nhọrọ nke "dị ọcha" na aka nri n'akụkụ kwesịrị ka a họrọ.
Ọzọ: Hichaa iTunes Library